Esi Album osise maka iTunes
> Resource> iTunes> Esi Album osise maka iTunes Library na ogbe
Ọ pụrụ ụgbọala ị crazy ọ bụrụ na ị nwere nnukwu iTunes n'ọbá akwụkwọ ahụ bụ kpam kpam na a ọgbaghara na-efu ozi dị ka album artwork ma ọ bụ etịbe ọmụma. Iji hazie gị iTunes n'ọbá akwụkwọ nke ọma, ị mkpa ka ịgbakwunye zuru ezu ọmụma niile songs. Ebe a bụ a na-apụtakarị ụzọ iji nweta album artwork maka iTunes Ọbá akwụkwọ na ndị ọzọ ozi dị ka ọkụ egwu, aha na ọbụna lyircs. Ihe ị chọrọ bụ a smart tool-- Wondershare TidyMyMusic maka Mac. Wụnye ya na gị na kọmputa na-wee soro anyị na-ego esi album artwork maka iTunes n'okpuru.
1 Tinye gị iTunes n'ọbá akwụkwọ
Ẹkedori TidyMyMusic mgbe arụnyere. Mgbe ahụ, gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ga-scanned na kwukwara ka usoro ihe omume na-akpaghị aka. Na oge ọzọ ị na-emeghe usoro ihe omume, ọ ga-eme ndị scanning ọzọ bụrụ na ị kwukwara ọhụrụ songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
2 Iṅomi dum n'ọbá akwụkwọ ma na-album artwork
Pịa iṅomi bọtịnụ na nkụnye eji isi mee na tinye akara checkbox nke "Chọọnụ unidentified Songs". Mgbe ahụ, a omume ga-amalite iji chọta unidentified songs na mata ha n'ụzọ. N'oge usoro, ozi niile nwere ike chọpụtara, gụnyere album nkà, track nkọwa, lyrics na ndị ọzọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị tinye akara checkbox nke "Chọọnụ duplicated Songs" na pịa iṅomi button, a usoro nwere ike ịchọpụta duplicated songs gị iTunes Ọbá akwụkwọ na ọ bụ gị na-ekpebi nke na otu onye ka ihichapụ ma ọ bụ i nwere ike idowe ha niile.
3 Embed album artwork ka onye ọ bụla song
Mgbe niile ọmụma na-chọpụtara, gụnyere album nkà, ị nwere ike họrọ otu song na-elele ọmụma na nri n'igbe. Wee pịa Mee bọtịnụ na ala ikike embed ozi na song. I nwekwara ike họrọ ọtụtụ songs na esepu ma na-etinye n'otu oge.
Cheta na: TidyMyMusic na-enye gị zuru nnwere onwe na-dezie ozi site onwe gị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na afọ ojuju na ihe a na-chọpụtara. Pịa a song na pịa Dezie icon na nri n'igbe. Mgbe ahụ ị pụrụ ịdọrọ ihe oyiyi ọ bụla na album nkà ebe ma ọ bụ jupụta na ozi ọ bụla na-edezi ubi.
Ebe a bụ otú i nwere ike inwe album artwork n'ihi na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ị kwesịrị ị na ibudata na onye na-enye ya a laa. Mgbe ahụ ị pụrụ idozi ma jikwaa gị iTunes n'ọbá akwụkwọ nke ọma na enyemaka nke album nkà.
Top 10 iTunes Scripts maka iTunes